... HtooEainThin.com ...
အခု င်္ိမင်ရတဲ့ ကိုထူးအိမ်သင်ရှဲ web site design ကို က္လတော် လုပ်ပေး ထားတာဗ္လ ... ဘယ်လိုလဲ တော်တော်မ္လားမ္လားက အြုပညာ မငေ်္ိမာက်ဘူး လိုဿ ဆိုင်္နေီကတယ်ဗ္လ... အြုပညာ ဘယ်ငေ်္ိမာက်ပြ့မလဲ... web site ဟုတ်တိ ပတ်တိ မရေးဘူးတဲ့ က္လတော်က ဟိုစမ်းစမ်း ဒီစမ်းစမ်းနဲဿ ရေးထားရတာကိုးဗ္လ... web site ရေးနေက္လသူ တေ့ကတော့ လေးလိုက်တဲ့ web site, ညံ့လိုက်တဲ့ web site လိုဿငေ်္ိပာင်္ီကလိမ့်မယ် ထင်တယ်ဗ္လ...
တကယ်တမ်းငေ်္ိပာရရင် က္လတော် ကိုယ်တိုင် layout ခ္လထားတဲ့ ဒီဇိုင်း တော့ မဟုတ်ဘူးဗ္လ... အရင်က ကို Thirteen ဆဲ့ခဲ့တဲ့ ဒီဇိုင်းပေမြဋ္ဋာ က္လတော်က အက္လႜ အသစ် င်္ိပန်ဝတ်ပေးလိုက်တဲ့ သဘောဗ္လ... က္လတော် ကိုယ်တိုင် အစ အဆုံး ဖန်တီးရမယ်ဆိုရင် ဒီထက်ညံ့မဋ္ဋာဗ္လ... အေးဗ္လာ က္လတော်စရေးတုန်းကတော့ php နဲဿ မဟုတ်ဘူးဗ္လ ... Dreamweaver နဲဿရေးထားတာ ဒီဆိုဒ်ရှဲ web master င်္ိဖစ်တဲ့ မောင်ဇန် ဆိုတဲ့ ဆေးက္လောင်းသားလေးက php င်္အိဖစ် င်္ိပန်ငေ်္ိပာင်းထားတာဗ္လ... Mg Zeng ဆိုတဲ့ ဆေးက္လောင်း သားလေးက ဒီက့န်ပ္လတြာပိုင်းမဋ္ဋာ တော်တော် တော်တဲ့ လူငယ်လေးဗ္လ... က္လတော့်ရှဲ ဆရာ ပေက်ြစလေးလိုဿလဲ ငေ်္ိပာလိုဿရတယ်ဗ္လ...
ကော်ဖီသောက်ခ္လိန် ရောက်နပီဗ္လ ... မင်းသီဟ သ့ားနပီး ကော်ဖီ သ့ားသောက်လိုက်ဦးမယ် ...
ခင်ဗ္လားတိုဿရော ဒီ htooeaintin.com ကို ရကိက်ြင်္ီကရှဲလားဗ္လ...
Actually I find the site pretty great. A little slow loading eg.the menu roll over effect doesn't show quickly.
Apart from that very professional looking site and it's one of the best myanmar sites I've come across.
A great job done indeed fromaperson with little experience on webdesign.
Some suggestions though, need to add meta tags for better search engine hit. ie.
Also song lists and other mm descriptions are all images and take quite awhile to load. Since you are using mm unicode ponya very well here, you should try to use there as well. Alot more easier to make changes/update and loading is faster.
Nah...those are just minors and dont even need to worry. I really like the site and thanks for making it available.
mayvelous ရေ ...
အခုလို င်္အီကံင်္ိပတြာကို က္လေးဇူးပပြဲဗ္လာ ... က္လတော်က င်္အိပင်ဘက် အက္လႝကိုပဲ အလဋ္ဋဆင်တတ်တာဗ္လ... င်္ိမန်အောင် ဘယ်လို ရေးရမလဲဆိုတာ မစဉ်းစား တတ်ဘူးဗ္လ... keyword & description ကို အကိုးအကားရဋ္ဋာနပီ ထည့်လိုက်ဦးမယ်ဗ္လာ...
အကို ထူးအိမ်သင်ဆိုဒ်အတ့က် အရမ်းကို က္လေးဇူးတင်ပတြယ်ဗ္လာ။ ဒပြေမယ်ှ ဒီဆိုဒ် စစခ္လင်းက ပုံစံလေးကို ပိုင်္ီကိက်ြတယ်။ ဆိုဒ်ထဲကို ၀င်လိုက်တာနဲဿ သီခ္လင်းသံလေးနဲဿ စတယ်။ စာသား မပဘြူး။ ကွှန်တော် အဲဒီ သီခ္လင်းကို မှေသ့ားနပီ။ ဒပြေမယ်ှ သိပ်ကောင်းတယ်။ အကို အဲဒလြေး နပန်အသက်သ့င်းရင် ပိုကောင်းမယ်လိုဿ ထင်ပတြယ်။ ကွှန်တော်ဆို စစဖ့င်ှခ္လင်း င်္ီကက်သီးတောင် ထခဲဿဖူးတယ်။
နောက်တစ်ခု ထူးအိမ်သင် ကဗ္လာထဲက။ နမဆိုတဲဿ ကဗ္လာ။
သိုဿသော် တေး မရဋ္ဋိ။
ကွှန်တော်ှအထင် အဲဒဟြာ တေး မဟုတ်ဘူး။ လေးနဖစ်ပလြိမ်ှမယ်။ ကွှန်တော် မူရင်းကို မဖတ်ဖူးဘူး။ ဒပြေမယ်ှ သူရေးခ္လင်တာ လေး နဖစ်မယ်လိုဿ ထင်တယ်။ အကို နပန်စစ်င်္ီကည်ှပြဦး ။ အဲဒီကဗ္လာဟာ အရမ်းကောင်းပတြယ်။ ဒပြေမယ်ှ အခုဟာက အနက် နဲနဲလဲ့နေသလိုပဲ။